अन्नपूर्ण आइतवार, कात्तिक १२, २०७४ 1661 पटक पढिएको
दुर्टघटनामा पौडिएर बाच्न सफल दिदीभाइ निविधता र शुभम चौधरी । तस्बिर : अन्नपूर्ण
एउटा अर्को दुःखद सडक दुर्घटनाको खबरले यसको जोखिम न्यूनीकरणबारे पुनः विमर्श आवश्यक देखिएको छ । राजविराजबाट काठमाडौंतर्फ आउँदै गरेको रात्रिबस शनिबार बिहानै त्रिशूली नदीमा खस्दा ३१ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने अरू थुप्रै घाइते भएका छन् । सप्तरीको तिलाठी कोइली शोकमग्न छ ।
राजधानी पुगेको खबर सुन्ने पर्खाइमा बसेका परिवारजनले आफन्त गुम्दाको बज्रपात सहनुपरेको छ । यो पछिल्लो सबैभन्दा ठूलो सडक दुर्घटना हो । यद्यपि यसै वर्ष पनि एकपछि अर्को सडक दुर्घटना भएका छन् । यसअघि डोटीको बोगाटन गाउँमा जिप दुर्घटना हुँदा नौजनाको ज्यान गएको थियो भने चार घाइते भएका थिए । दसैं आसपास भएका दुर्घटनामा पनि थुप्रै सर्वसाधारण सिकार भए । यस्ता अनेक दृष्टान्त हेर्दा लाग्छ, दुर्घटना हाम्रो नियति झैं बनेको छ । यसमा चालक, व्यवसायी, सरकार सबै पक्षको गम्भीरता आवश्यक छ ।
दुर्घटनाका बेलामा समीक्षा हुने, दुर्घटनाका कारण पत्ता लगाउन अध्ययन हुने अनि बिर्सिइने प्रचलन छ । कम्तीमा ती अध्ययनका निष्कर्षहरू प्रभावकारी ढंगले पछ्याउने हो भने यसखाले दुःखद खबरसँगको साक्षात्कार सायद कम हुन्थ्यो । विडम्बना के छ भने अध्ययन गरिन्छन्, कारणहरू पनि पत्ता लाग्छन् तर कार्यान्वयन हुँदैनन् । जसले गर्दा उही र उस्तै प्रकृतिका त्रुटि दोहोरिन्छन् र निर्दोषहरू अनाहकमा मारिन्छन् । पछिल्लो दुर्घटनाको प्रारम्भिक खबर हेर्दा पनि चालकको त्रुटि हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । रात्रिकालीन र लामो दूरीका बसचालक परिवर्तन गर्ने नियम बनाइएको छ, तर अनुगमन नहुँदा एउटै चालकको मात्रै प्रयोग हुँदा थकान र निद्राका कारण दुर्घटना बढेको तथ्य यसअघिका कयौं दृष्टान्तले पुष्टि भइसकेको छ ।
त्यसो त दुर्घटना दुःखद संयोग हो । मानवीय कमजोरी वा सडकको कमजोर अवस्थाका कारण हुनसक्ने दुर्घटना केकसरी र कुन बेला आउँछ भन्न सकिने विषय होइन । त्यसकारण हरपल यसमा सचेत हुनुको विकल्प हामीसँग छैन । यात्रु, चालक, व्यवसायी, सरकार सबैले दुर्घटना कम गराउन आआफ्नो ठाउँबाट सचेत र सजग हुन जरुरी छ । यसमा सबैभन्दा बढी सरकारी नियमन आवश्यक छ । क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखेर सवारी चलाएको छ कि ? सवारीको अवस्था केकस्तो छ ? लामो दूरीमा पनि एउटै चालक प्रयोग भएको छ कि ? सडकको अवस्था आदिको बारेमा नियमित नियमन हुनुपर्छ । सँगसँगै चालक र व्यवसायीहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । यात्रहरूको सुरक्षित अवतरणको जिम्मेवारी बोकेका चालकमा त्यसप्रति संवेदनशीलता र जिम्मेवारीबोध हुन आवश्यक छ ।
दुर्घटनाका अहिलेसम्मको प्रवृत्ति हेर्दा यसमा केही मूलभूत कारण जिम्मेवार हुन्छन् । जस्तो- सवारी नियमको उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति । सडकको कमजोर पूर्वाधार । चालकको लापरबाही । सवारी साधनको सिन्डिकेट । प्राविधिक रूपमा चलाउन नमिल्ने अवस्थामा पुगेको सवारी साधन । त्यसमा पनि क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने प्रवृत्ति । यस्ता अनेक कारण छन् दुर्घटनाका ।
शनिबार त्रिशूलीमा बस किन खस्यो ? कसको त्रुटि हो यो ? यसको छानबिन आवश्यक छ, तर छानबिनपछि बिर्सिने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ । दुर्घटनाका कारण पत्ता लगाई त्यसलाई पाठका रूपमा ग्रहण गरी त्रुटि नदोहोर्‍याउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । दोषी देखिएको पक्षमाथि कारबाही हुनुपर्छ र सडक दुर्घटनाका जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्नेतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्छ, अन्यथा हाम्रा सडकहरू ‘मृत्युमार्ग’ बनि नै रहनेछन् ।
काठमाडौं- ५ मा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा 6647
प्रदेशमा तत्काल पाँच हजार कर्मचारी 13459
पहिलो चरण चुनाव : आज अन्तिम प्रचार 2377
कम्युनिस्टहरूको प्रणाली परिवर्तन 1004
गोरखामा एक बोरा सुतली बम भेटियो (अपडेट) 8223
निर्वाचन विरोधी एक शिक्षक पक्राउ 1075
निर्वाचन कार्यालयमै शक्तिशाली बम 2727